Thursday,February 27,2020 02:00 AM
Uhuru says Nairobi attackers 'eliminated',...
ICC prosecutors to appeal acquittal of Laurent...
Added 16th January 2019 02:04 PM
Security forces have shot dead at least five people and wounded 25 others during the crackdown since Monday's protests
Zimbabwean cleric and activist Evan Mawarire enters in a police car under the supervision of Zimbabwean policemen after he was picked up from his home in Avondale, Harare. AFP Photo
Zimbabwean policemen outside the home of Evan Mawarire. AFP Photo
Zimbabwe's economy has been in dire straits since hyperinflation wiped out savings between 2007 and 2009, when the Zimbabwean dollar was abandoned in favour of the US dollar.
Mnangagwa -- Mugabe's former deputy -- has claimed that he represents a fresh start and has vowed to revive the shattered economy by attracting foreign investment.
Zimbabwe protest pastor freed on bail
Zimbabwe protest leader Mawarire released on bail